တောင်ငုံး - သတ္တဗေဒ. သတ္တဗေဒအလိုအရ ‌တောင်ငုံးသည် ‘ပစ်တီဒီ
တောင်ငုံး - သတ္တဗေဒ. သတ္တဗေဒအလိုအရ ‌တောင်ငုံးသည် ‘ပစ်တီဒီး’မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍၊ ယင်းကို ‘ပစ်တာမိုလပ်စင်ဆစ်’ဟု‌ခေါ်သည်။ အလျား ၈ လက်မခန့်ရှိသည်။ ဦး‌ခေါင်း၏ အလ ..
သတ္တဗေဒအလိုအရ ‌တောင်ငုံးသည် ‘ပစ်တီဒီး’မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍၊ ယင်းကို ‘ပစ်တာမိုလပ်စင်ဆစ်’ဟု‌ခေါ်သည်။ အလျား ၈ လက်မခန့်ရှိသည်။ ဦး‌ခေါင်း၏ အလယ်တည့်တည့်မှ လည်ကုပ်သို့ ဆင်းလာ‌သော အမည်းဆင်းတစ်ခုသည် နှုတ်သီးဘက်မှ မျက်‌စေ့များကို ဖြတ်‌ကျော်လျက်ရှိ‌သော အမည်းစင်းများနှင့် လည်ကုပ်တွင် ဆုံကြပြီးလျှင် ‌ကော်လာသဖွယ် လည်ကုပ်ကို ရစ်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ပျံသန်း‌နေစဉ် ‌တောင်ငုံး၌ အပြာရင့် ‌ရောင်ရှိသည်ဟု ထင်ရ၏။ ‌တောင်ပံတွင်ရှိ‌သော အဖြူကွက်များ ကိုလည်း ထင်ရှားစွာမြင်ရသည်။
နံနက်ခင်းနှင့် ည‌နေခင်းတွင် ‌တောင်ငုံးသည် သာယာ စွာ ‌အော်မြည်တတ်သည်။ ‌တောင်ငုံး၏‌အော်သံကို အများအား ဖြင့် တစ်‌နေ့လုံး ကြားရတတ်သည်။ လသာ‌သောညအခါ၌ လည်း ကြားရလေ့ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဲခူးရိုးမရှိ ‌တောင်ငုံးများသည် မိုးဥတုတွင် ကျွန်း‌တောများ၌ ကျက်စား‌လေ့ရှိသည်။ ထို‌တောင်ငုံးသည် အချို့တောင်ငုံးများကဲ့သို့ သစ်‌တောထူထပ်ရာ‌ဒေသတွင် မ‌နေကြ ‌ချေ။ တစ်ခါတစ်ရံ ရွာနီးချုပ်စပ် ဥယျာဉ်နှင့် ယာခင်းများသို့ လာ‌ရောက်တတ်ကြသည်။ အအုပ်အသင်းဖွဲ့၍ ‌နေ‌လေ့မရှိ‌သော် လည်း စုရုံး‌နေကြသည်ကို မကြာခဏ ‌တွေ့ရတတ်သည်။
ပရွက်ဆိတ်နှင့် အင်းဆက်ပိုးများကို စား‌လေ့ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ‌တောင်ပိုင်း‌ဒေသနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတွင်‌နေ‌သော ‌တောင်ငုံးများ၏ သား‌ပေါက်ချိန်မှာ ဧပြီလမှ ဩဂုတ်လထိ ဖြစ်သည်။ ထို‌တောင်ငုံးများသည် အသိုက်ကို ‌တောအတွင်း ‌ချောင်းကမ်းပါးတွင် ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ဥများ မှာ အခြား‌တောင်ငုံးမျိုးတို့၏ ဥများထက်လှသည်။
‌တောင်ငုံးများကို အာဖရိကတိုက်၊ အာရှတိုက် ‌တောင်ပိုင်း နှင့် ဩစ‌တြေးလီးယားတိုက်တို့တွင်လည်း ‌တွေ့ရသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ပဲခူးရိုးမ၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌တောင်ပိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ‌တွေ့ရသည်။ သတ္တဗေဒ အမည်အားဖြင့် ပစ်တာမျိုးရင်းထဲတွင် ‌ဖေရီ၊ နီပါလင်ဆစ်၊ အိုတီစီ၊ စီရူလီ၊ ဆိုင်‌အေးနီးယားစ‌သော ‌တောင်ငုံးမျိုးများလည်း ပါဝင်ကြသည်။
တ င င ရင မည တ င င ရင မ Taungnong Yinmell Hydrornis gurneyi သည အရ ယ အစ အလယ အလတ ရ သ မ လ င က ဖ စ သည မလ က န ဆ ယ သ ပ က သ လည
ဆ င င ရ အင ဂလ ပ Hsawngngone သည ရ မ ပ ည နယ တ င တ င က ခရ င တ င က မ နယ န င က က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
င သ ရ အင ဂလ ပ Ngonethon သည ရ မ ပ ည နယ တ င တ င က ခရ င ကလ မ နယ င သ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
ရ မ ပ ည နယ တ င တ င က ခရ င ကလ မ နယ င သ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည သန ခ င စ ရင အရ င သ က ရ အ ပ စ တ င
ဘ တ ပ င မ နယ တ င တည ရ ပ ရ ပ မ စ တ ဖ စ သ တ င င ရင မည သ မဟ တ ဂ န တ င င Gurney s Pitta ပ န လည ရ ဖ ရန ရည ရ ယ တည ထ င ခ ခ င ဖ စ သည
ထ င န င င ရ မ န မ န င င ရ ပ အန တရ ယ ရ တ မ စ တ ဖ စ သ တ င င ရင မည သ မဟ တ ဂ န တ င င မ က အမ အပ တ ရ န င သည တကမ ဘ လ ခ မ ခ က ခ န ရသ
ဆင မင ဘဝ ခ င သ မင ဘဝ ဆတ မင ဘဝ ဖ တ မင ဘဝ က က မင ဘဝ င မင ဘဝ မ ဆ သ ဘဝ အ ဖ င ဤမန တလ တ င အန တစ ဝ က တ င ဖ စ ခ ဘ သည ဘ ရ ဖ စ တ မ သ အခ
က မ ဆ ပင န င ခ န ယ ပ မ စ ပ က သည က က က န လ ပ ခ လ င ခ င စစ စလ ဇ က က တ က က တ က င တ ဆ တ တ ဝက ဖ ဗ င မ က
မ နယ အတ င မ မ ရ ဇ န ခ ရ ပ က က ဝက ဘ က န သ ဆ တ င န စ န င ပ ဇ န စသည မ မ ရ လ ပ ငန မ လ ပ က င က သည ခရ သ လ ပ ငန မ
ရ င မ ဂ ဂလ ပ တ တ ဿထ ရ က မ လ ထ အခ ထ ရ က မ တ စ ဘ ရ ဘ ရ လ င ဘဝက င မင င ရ မင ပ မင ရ သမင မင စသည ဘဝမ တ င က င လည န ထ င ခ သည
သ မ င က လင ယ န စ န ခ ခ ည ခင စ တ သစ တ က င က ဘ တ င ဘ စစ စလ င မ ရ က ပ သည ရ သတ တဝ မ မ င ရ င က င င ဘတ င ရ
က န မ န င အ မ မ သတ တဝ မ ဖ စ သ က က ဘ ဝက သ ဆ တ င ခ န င က င မ မ မ က ပ သည အထ သဖ င ဘ မ မ ခ င န င ဘ သ ပ က လ ပ ငန မ
Maw လ ယ မ Kalaw MMR014005018 Ngoke င တ Kalaw MMR014005019 Ngone Thon င သ Kalaw MMR014005020 War Yon Pin ဝ ရ ပင Kalaw MMR014005021 Thi Hkawng
သ ရက န င တမ က က တ ဥဩင က က င က ငန လည ဝတ တ ဘ လ ရ င ခ ခ သ တ မ မ မ တ စ ဘ ရ သ လ ဖ က တတ အ သမ ဖ က န က လ က
င င သတ တဝ သည ယ တမ စက ဝ န န ဘ ဝတ ရ ပ ဆ င ခ က ဖ စ သည ဟ ယ က ည ထ က သည င လ က က လ သတ တဝ ဖ စ ပ ခ တစ ခ င သ ပ က လ န င ဆင တ သည ဟ ဆ သည
တည ရ တ င သ မ က လ ကပ ပဋ ဌ တ လ ပ မကစ ရဘ ဒ က က စ တ က ပဉ စမမ က ကပ ပဋ ဌ တ ဖ စ ရမယ လ အ က မ ပ လ ပ ဆ င ခ တ ဖ စ ပ တယ စက င တ င ဆ တ
အလ အ ဖ င ပစ တ မ လပ ဆင ဆစ ဟ ခ သည တ င င မ သည မ ရ သ အတ င က န တ မ တ င က က စ လ ရ အခ တ င င မ က သ သစ တ ထ ထပ ရ တ င မန ဘ
ထန ရည အ တ က သ မ ဆည ရသည ထ စဉ တ င သ မ ငယ တ က ဖ တ ပ တတ ယ န ခ င က က မ ပ မက န စ က င သ သတ တဝ တ က ခ က လ န ဖမ ဆ ရသည ယင သ ဖ င
မ သစ တပ က က ပ က ပ ခ စ ရပ တ လ ခ န တ မည စက စ အပ မ ပ လည က ပ က င ပခ ဆ စပ ပ ဟပ တသ ယ ဒ င လည ပ န ပ င က င ရင ဒ လ ဇ ဂ လက ယ
င ည သ အ ဖ င သ တ ပ တ က ပ ပ င ရင တဖ ည ဖ ည ရလ မ အ မယ လ င ကလ မ လ တစ န သ လည အမ ပ က န န န စ င ဆ င မ လင န ခ တ ပ
အမ သမ မ လည အ က မခ ဝင ထ ခ က သည က တ ရသည ထ သ ထ ရ တ င ပ င တစ ဖက င ရ ပ တစ ဖက က က ရ ပ တစ ဖက တစ ရ ပ စ ထ န က ခ င မ ဖ စ သည မ န က သ
တ င က ခရ င ကလ မ နယ င သ က ရ အ ပ စ က က တလ - တ င က ခရ င ရပ စ က မ နယ က င ဘ က ရ အ ပ စ က က တလ - တ င က ခရ င ရပ စ က မ နယ
င က တ က က သ ရက န င တမ က က တ ဥဩင က က င က ငန လည ဝပ တ ဘ လ ရ င ခ ခ သ တ မ မ မ တ စ ဘ ရ သ လ ဖ က တတ အ သမ ဖ က န က လ က
ဖ လ င က င က သ သ လည က င သဏ ဌ န တ အလ အရ ည ဆ န ရ မ က စ န မ တ င စ န အထ မ င ပ င ဝဝ န ပ ရ လ က အရ န င အန က အက ယ ဆ န ရ တ င
က တ က ပ န တ က ပ ဆ တ တ က ပ သ တ က ပ က က တ က ပ င တ က ပ တ တ သ င ပ လက ဝ ထ ပ လက ပမ လ ပ စ ခ င ထ ပ
တောင်ငုံး, သတ္တဗေဒ. တောင်ငုံး,